Toriteny Alahady paka 01 Aprily 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
I Maria Madelena dia olona akaiky an’i Jesoa, araka ny Soratra Masina dia nanana fifandraisana vonto fihetseham-po taminy izy. Ny antony nandehanany tany amin’ny fasana dia hijery sy hanosotra diloilo manitra ny vatan’i Jesoa satria olona akaiky azy Izy. Rehefa tonga teo amin’ny fasana izy dia nahita ny vato efa nikodia niala teo amin’ny fasana. Ao amin’ity Evanjely ity moa dia miverina inefatra ny teny hoe « nahita » ary samy hafa daholo ny heviny amin’ny teny Grika izay nanoratana azy. Eto ny dikany dia hoe : mahita zavatra na tranga iray fa tsy takatry ny saina izay ao hevitra ambadiny. Efa hitany fa nisy lamba teo dia mbola noheveriny hoe nangalarin’olona ny Tompo fa tsy takany hoe nitsangan-ko velona Izy satria ny fihetseham-po no nanosika azy. Noho izany dia tsy tokony hijanona ho fihetseham-po fotsiny ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra fa fifandraisana lalina, fanajana ny Tenin’Andriamanitra.
Ilay mpianatra malalan’i Jesoa
Tsy notononina ny anarany satria tian’ny Evanjelista hotenenina amintsika fa isika ihany io mpianatra malala io. Noho izany dia tokony ho toy ny an’io mpianatra io koa ny fiainanatsika : tena misy fifandraisana lalina amin’i Jesoa Kristy io mpianatra io, maimay fo hiaraka Aminy, sahy mijoro amin’ny finoana na inona na inona filazan’ny olona, tsy mandositra ny finoana fa mifikitra tanteraka amin’i Jesoa na inona na inona zava-mitranga ary mandray an’i Masina Maria ho Reny ; ary ny finoana tao anatiny no nanosika azy handeha mafimafy kokoa. Ny olona akaiky an’Andriamanitra dia haingana kokoa ny fahazoany ny Misterin’Andriamanitra eo amin’ny fiainana, mahay mandanjalanja ary matoky ny fitantanan’Andriamanitra ny fiainany. Noho izany, mila kolokoloina ao anatintsika ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin’ny fasana izy dia tsy niditra fa niandry an’i Piera aloha, izany hoe nanaja ny ambaratongam-pahefana izy satria fantany fa i Piera no lohan’ny Fiangonana ary ny olona manam-pinoana no mahavita manaja izany. Rehefa tonga teo amin’ny fasana izy dia nahita ka nino : tsy mijanona fotsiny amin’ny zavatra hita fa mitarika amin’ny finoana an’Andriamanitra. Halalino ary angataho amin’Andriamanitra ary ny finoana satria arakaraky ny maha-akaiky an’Andriamanitra amintsika no hahazoantsika ny Mistery tian’Andriamanitra aseho eo amin’ny fiainantsika.
I Piera rehefa tonga teo amin’ny fasana dia niditra ary nahita ny lamba mbola teo, izay tsy hitan’i Maria Madelena tamin’izany. Tsy mijanona amin’ny zavatra hitan’ny maso fa mampiasa ny saina handinihana ny hevitra ao ambadika na ny hoe « Contempler ». Ny olona tompon’andraikitra rehetra (ao amin’ny Fiangonana, ao an-tokantrano, sns) dia tokony haka tahaka an’izay toetran’i Piera izay avokoa.
Mirary soa antsika ary amin’izao fankalazana ny Paka izao mba hitombo finoana hatrany ary hifikitra amin’ilay efa nahafoy ny ainy ho antsika ary nitsangan-ko velona ho fanalana ny fahotantsika.
Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Toriteny